Alahady – 07/12/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 40, 1-5.9-11)
Tompo manorena arabe any an-tany lava volo ho an ‘ny Andriamanitsika. Aoka ny lohasaha rehetra hasandratra ; ny tendrombohitra aman-kavoana rehetra haetry ; ny avo hanjary tany lemaka ; ary ny vato mideza ho lembalemba. Dia hiseho ny voninahitry ny Tompo, ka ho hitan’ny nofo rehetra tsy ankanavaka fa ny vavan’ny Tompo no efa niteny ». Miakara eny an-tendrombohitra avo ianao izay mitondra ny vaovao mahafaly ho an’i Siôna. Manandrata feo mafy ianao, izay mitondra ny vaovao mahafaly ho an’i Jerosalema; manandrata feo, fa aza matahotra, lazao amin’ny tanànan’ ny Jodà hoe : « Indro ny Andriamanitrareo ! Indro fa tonga ny Tompo Andriamanitra, amin’ny heriny ; ny sandriny mampiasa ny fahefana. Indro fa miaraka aminy ny valisoa avy aminy, ary ny tamby homeny, eo anoloany. Toy ny mpiandry ondry hiandry ny andian’ ondry Izy ; handray ny zanak’ondry amin’ny sandriny hitondra an’ireny eo an-trotroany, ary handroaka moramora ny mampinono ».
Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md Piera Apôstôly (2 Pi 3, 8-14)
Ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka ho fantatrareo : amin’ ny Tompo, ny indray andro dia hoatra ny arivo taona, ary ny arivo taona dia hoatra ny indray andro. Koa tsy ahemotry ny Tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany fa miandry anareo amim- pandeferana Izy, mba tsy hisy very na dia iray aza, fa samy hanatona sy hibebaka daholo. Ho avy toy ny mpangalatra ny andron’ny Tompo, ary amin’izany andro izany, ny lanitra hirimorimo mankarenina, ny tenan- javatra rehetra ho levon’ny afo, ny tany mbamin’ny asa rehetra eo aminy hodorana. Koa raha tsy maintsy ho levona àry izao rehetra izao, ho toy inona no tokony ho fahamasinan’ny fitondran-tena amam-pitiavam-bavakareo, amin’ ny fiandrasana sy fanafainganana ny hiavian’ny andron’ny Tompo, izay hahamay sy hahalevona ny lanitra, ary handoro sy hampiempo ny tenan’ny zavatra rehetra ? Eny, araka ny fampanantenany, dia manantena ny lanitra vaovao sy tany vaovao isika, izay hanjakan’ny fahamarinana. Amin’ny fiandrasana izany, dia ataovy izay tratry ny ainareo, mba ho tsy manantsiny amam-pondro ary mihavana tsara, no hahitan’ny Tompo anareo.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 1, 1-8)
Fiandohan’ny Evanjelin’i Jesoa Kristy Zanak’ Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin’i Izaia Mpaminany hoe: « Indro aho maniraka ny Anjeliko eo alohanao, izay hamboatra ny lalanao ; injay misy feo miantso any an’efitra hoe : “Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny alehany », dia niseho tany an’ efitra i Joany Batista nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka. Ary nandeha nanatona azy ny tany Jodea rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerosalema, ka nataony batemy tamin’ny onin’i Jordany ireo, rahefa niaiky ny fahotany. Volon-drameva no nitafian’i Joany, fehikibo hoditra no nanodidina ny andilany, ary valala sy tantely remby no fihinany ; ary izao no notoriany : « Avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika, hamaha ny fehikapany akory aho. Izaho nanao batemy tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batemy anareo amin’ny Fanahy Masina ».